သမိုင်းကြောင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်
တရားရုံးများ၏ Website လိပ်စာများ
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ အမှုများ၏ စီရင်ချက်များ
လက်ခံကြားနာသည့် အမှုများ အခြေအနေ
တရားရေးဝန်ထမ်းအဆင့်(၄) (ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီးအဆင့်) ရာထူးအတွက် အောက်မြန်မာပြည်စာစစ်ဌာနတွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများစာရင်း
(၂၁-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၅-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရငး
(၂၁-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၅-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
(၁၄-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁၈-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ) ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
(၁၄-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁၈-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
(၇-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၁၁-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့ထိ) တရားမဆိုင်ရာကြိုတင်သတိပေးအမှုစာရင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်သည် ရန်ကုန်မြို့၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၁၄( အီး )၊ မြေကွက်အမှတ်-၁(အေ) ပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ မြေ အမျိုးအစားမှာ အစိုးရမြေအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး “ Chief Court ” ဟု အမည်ပေါက်ကာ မြေဧရိယာ အကျယ်အဝန်းမှာ ၃.၇၈၀ ဧကရှိပါသည်။ဤအဆောက်အအုံကို ၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီး စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေရူပီး နှစ်ဆယ့်လေးသိန်းခွဲ ဖြစ်ပါ သည်။ ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ အမွေအနှစ်အဆောက်အအုံဖြစ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တွင်အထိမ်းအမှတ် အပြာရောင်ကမ္ဗည်းပြား (Blue Plaque) တပ်ဆင်ခြင်းအခမ်းအနားကို (၂၄-၁၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
ပရဝုဏ်အကျယ်အဝန်းမှာ အရှေ့ဘက် ပန်းဆိုးတန်းလမ်းတွင် အလျား ၃၆၀ ပေ၊ အနောက်ဘက် မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းတွင် အလျား ၃၇၈.၆ ပေ၊ တောင်ဘက်ကုန်သည်လမ်းတွင် အလျား ၄၀၀ ပေ၊ မြောက်ဘက် မဟာဗန္ဓုလလမ်းတွင် အလျား ၄၀၀ ပေ ရှိပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ ပင်မအဆောက်အအုံမှာ စတုဂံပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်ပြီး အဆောင်ကြီး (၄)ဆောင်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကာ အလယ်ဗဟိုတွင် မြက်ခင်းပါရှိသည့် ပန်းခြံတစ်ခုရှိပါသည်။ အဆောက်အအုံအမြင့်မှာ ၇၀ ပေရှိပြီး သုံးထပ်အဆောက်အအုံ ဖြစ်ပါသည်။ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းဘက်ရှိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် အဆောက်အအုံ အတွင်းသို့ဝင်သည် ပင်မဝင်ပေါက် (Main Entrance) ၏ အပေါ်တည့်တည့်တွင် ၁၃၃ ပေ၊ ၆ လက်မ အမြင့်ရှိသော နာရီစင်ကို ဆောက်လုပ် ထားရှိပါသည်။
ဤအဆောက်အအုံကို လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကိုလိုနီခေတ်တွင် တရားလွှတ်တော် (High Court) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်တွင် တရားလွှတ်တော်ချုပ် (Supreme Court) နှင့် တရားလွှတ်တော် (High Court) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်တွင် တရားရုံးချုပ် (Chief Court)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်တွင် ဗဟိုတရားရုံး( Central Court) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မျက်မှောက်ခေတ်ကာလတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် (Yangon Region High Court) အဖြစ်လည်းကောင်း ခေတ်အဆက်ဆက် အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။
Copyright © 2019 High Court of Yangon Region. All Rights Reserved.
Email : yangon.hc@mptmail.net.mm
Last Updated:2September' 2019